Ny Stonehenge sy ny Paka dia fantatra manerana an'izao tontolo izao noho ireo rafitra vato tsy mahazatra sy tsy hay hazavaina. Fa indraindray vato dia manome voninahitra ny fanahin'ireo razambe, alitara na fasana. Ohatra, ireo mpizahatany dia tonga any Korea atsimo ao amin'ny nosy Ganghwado, izay ankafizin'ny dolmens sy ny angano ara-tantara mifandray amin'izy ireo.
Ny momba an'i Ganghwad
Ny nosy fahadimy lehibe indrindra ao Korea Atsimo dia ny Ganghwado Island: 302.4 km ats. km. Izany no ampahany lehibe indrindra amin'ny faritr'i Ganghwa izay misy azy io. Ny marika ambony indrindra amin'ny nosy Ganghwado - 469 m - ny Mount Manisan . Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 65,5 arivo ireo mponina ao amin'ilay nosy.
Ny fananganana an'i Kanhwado dia efa nisy taonjato maromaro lasa izay, ny nosy dia tetik'ady maharitra nandritra ny fotoana ela. Araka ny hevitry ny angano, i Tangun - ilay mpitondra teo aloha sady mpanorina an'i Korea fahiny - dia nanorina teo amin'io tampony io ny alitarany mba hidera sy hanome voninahitra ireo razambe. Ny mponina any Korea Atsimo dia antsoina matetika hoe Nosy Ganghwad of dolmens.
Jeografia ao amin'ny nosy
Mipetraka ao amin'ny Ranomasina Mavo any akaikin'ny morontsiraka atsimon'i Korea Atsimo izy, eo am-bavan'ny Reniranon'i Han. Ny reniranon'ny renirano dia manasaraka azy amin'ny tanànan'i Kaesong, any Korea Avaratra. Avy ao amin'ny tanibe, ny nosy dia mifamatotra amin'ny tetezan'i Ganghwadge sy Chodzhidege, miampita rano lava tery. Ny tanànan'i Ganghwa akaiky indrindra dia Gimpo .
Ny faritra any amin'ny nosy dia 11 mipetraka ary 17 amin'ireo nosy kely tsy misy mponina sy fotodrafitrasa maharitra. Ny velarantanin'ilay tanàna dia 797 kilometatra toradroa.
Ny lanjany ara-tantara amin'ity faritany ity dia avo dia avo tokoa: eto no misy toerana mahasarika ara-kolontsaina sy malaza eo an- toerana fa tsy any Ganghwad irery ihany, fa koa ao amin'ny kaominina ary tanànan'i Incheon , izay an'ny nosy. Ny tena mampiavaka azy ireo dia:
dolmens Coindol - fasam-borona miisa 80 amin'ireo adidin'ny vato lehibe amin'ny Bronze Age;
ny alitaran'ny sorona nataon'i King Tangun Wangom ao Chhansondan eo an-tampon'ny Havoanan'i Manisa - efa mihoatra ny 4000 taona izy;
Ny Museum History, izay mampiseho fampisehoana sy seminera momba ny tantara sy ny kolontsain'ny Ganghwado Island;
Tamtamgak dia tranon'ny Koreana nentim-paharazana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Hanok, izay nifindra tànana manokana ary navaozina ho an'ny mpitsidika sy ny mpizaha tany;
Ny fitsidihana an-tsarimihetsika momba ny fiarovana ny nosy dia fiarovana 7 ary 53 fòa, ny ankamaroan'izy ireo (Endutonde, Kwensobo, Tokchichin, sns.) dia naverina ho an'ireo mpizahatany amin'ny endriny voalohany;
sehatry ny fisarahana an-tsitrapo ao Fort Tokchijin;
Ny monastera bodista Chondynsa , izay hatramin'ny taonjato faha-XIII no nitazona ny soratra tany am-boalohany bodista;
ny monastera tamin'ny taonjato XII Pomunsa sy ny sarivongan'i Buddha, dia nanapaka tao amin'ny vatolampy.
Ny totalin'ny dolmens ao amin'ny nosy Ganghwad dia voaisa ary niditra tao amin'ny lisitry ny UNESCO 157 misy. Ao amin'ny valan-tseraseran'ny dolmens, dia afaka mankafy ireo vatolampy madinidinika ianao, fa koa ireo kopia tsara amin'ireo zavatra malaza any amin'ny firenen-kafa. Ary amin'ny faran'ny volana jolay-Aogositra dia misy fetiben'ny dolmens.
Amin'ny fialamboly hafa, afa-tsy ny mandeha an-tongotra ao amin'ny nosy ary midera ny masombolon'ny ranomasina, dia mendrika ny manamarika làlam-pandrosoana amin'ny famolavolana ny matoatoa mahazatra zhmunskok. Afaka mandray anjara amin'ny asa ianao, ary mividiana fahatsiarovana anao fotsiny. Aza adino ny manandrana ny radi tsy mahazatra ganhwa sunma sy dite avy amin'ny ginseng ao an-toerana.
Tsara ny manamarika fa vorona an'arivony maro no mijanona ao amin'ny Nosy Ganghwado noho ny fialana sy famerenana. Ireo ornithologista sy mpizaha tany avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia tonga eto mba hijery ity hetsika mahafinaritra ity. Saingy ho an'ny fitsaharana amin'ny torapasika dia tsy ilaina ny manisa: ny ranomasina eto dia maloto, miaraka amin'ny fandaniana matetika, izay manimba ny kalitaon'ny morontsirak'ilay nosy. Ankoatra izany, ny manodidina ny mpifanolo-bodirindrina avaratra dia mametraka ny fitondrany manokana amin'ny fitsidihana ny tsipika sy ny fandroana.
Ny hotely ao amin'ny nosy Ganghwad dia isan-karazany: avy amina trano kintana 5 kintana mankany amin'ny kintana 3, ary koa ireo toeram-piompiana toetr'andro amin'ny toetr'andro. Ny efitrano dia tsy omena any amin'ny halalin'ny nosy, fa any amoron-dranomasina any akaikin'ireo mpizahatany, indrindra fa avy any atsimo-andrefan'ny nosy. Ireo traikefa niainana dia nanosika ny hijery ny Lapan'ny Ganghwa Tomato, ny Hotel Everrich ary ny Moonlight Spring Pensions.
Ho an'ireo trano fisakafoanana sy café izay ahafahanao misakafo tsara sy miala sasatra, ny sakafo maintin'ny sakafo Koreana sy Japana , ny seafood, pubs ary trano fialamboly, ary koa ny tranokala haingana dia misy ao Ganghwad. Andeha hojerentsika, fa tsy misy na aiza na aiza tokony hiantehitra amin'ny serivisy Koreana miasa: amin'ny nosy iray ny rhythm ary ny fomba fiainana tsy dia haingana toy ny any Seoul . Ny fitsidihana tsara indrindra dia niangona avy amin'ireo trano fitsangatsanganana toy ny lanitra kitro, Dokasikdang, J'st Coffee and Chicken collection.
Ahoana ny fandehanana any amin'ny Nosy Ganghwado?
Maro ireo mpizahatany tonga any amin'ny nosy dolmens avy any Seoul - 60 km eo avaratra andrefana amin'ny lalana. Io halaviran-dalana eny amin'ny arabe maintso 48 io dia azo resena amin'ny alalan'ny fiarandalamby mandalo, izay mivoaka isaky ny folo minitra, na amin'ny fiara na taxi.
Raha te handeha amin'ny fiaramanidina ianao, dia afaka maka fiaramanidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Incheon , ary avy eo dia mampiasa ny serivisy shuttle.
Sakafo Oolong dia tsara sy ratsy
Mofomamy avy amin'ny voatavo miaraka amin'ny oranges
Ahoana no ahazoana vola amin'ny sary?
Atao amin'ny maso maitso sy volo manga
Parfume Bruno Banani
Ankizy matavy kakazo
Nahoana no manana takolaka mena ilay zaza?
White bar ho an'ny bar
Salady misy kaviar mena sy atody
Mesoroller ho an'ny volo
Tranoben-taratasy ho an'ny lakozia
Sarimihetsika mikasika ny fiainan'i Freddie Mercury noho ny fandrahonana tsy nahomby
Kitapom-batana ho an'ny nifamihina
Sakafo amin'ny teny Frantsay ao anaty oven - fanovana efa taloha sy hevitra vaovao ho an'ny sakafo mahasalama anao
Dibera 6 petal - menamena
Iza ireo gay - angano 10 momba ny firaisan'ny samy lehilahy